Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Thola ngomumo ukuba kushaywa away nge Italy ngesitimela ngu okwamanje ushiya unyawo ngizilethe ezweni laso elikhulu. Izwe umlando, Umklamo omuhle, isiko zingaphezu kwamandla futhi enjalo nenhle, abantu eyinkimbinkimbi futhi ziziphatha kahle kuyoba into uzokhumbula kuze usuku lwakho lokugcina!…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Umugqa omusha isitimela usethule, esehlanganise Azerbaijan, igalikuni, futhi Georgia. Umugqa luyasibekela 820 Angu futhi yokuhlala freights ngaphezu izitimela umgibeli. Okokuqala, umugqa Izoba ngeyokuqala ukuxhuma eYurophu nase China ngenkathi ngokudlula Russia. The train will operate from…
Isikhathi sokufunda: 4 amaminithi Kunezindlela eziningana iziteshi ezithakazelisayo futhi esebenzayo isitimela e-Spain. Uzothola high speed, ibanga naphakathi, lesifunda, travel wedolobha nehhotela-isitimela kulo lonke izwe. Kusukela iziteshi ezinkulu zanamuhla ezincane sizungezwe nemvelo, lezi izi 10 of Spain’s most Fascinating Train…